Android Phone မှာနေရာနည်းနေပြီလား? DiskUsage သုံးပြီးဖိုင်တွေကိုရှင်းပါ။ – DigitalTimes.com.mm
404 Shares 154 Views
Android Phone မှာနေရာလွတ်တွေ နည်းလာတာဟာ သင့်ဖုန်းရဲ့ Performance,Speed ကိုကျစေပါတယ်။အဲဒီအတွက်မလိုအပ်တဲ့ App တွေကို Uninstall လုပ်သင့်သလို မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေကိုလည်းရှင်းပစ်သင့်ပါတယ်။ဒီလိုရှင်းဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံး App တစ်ခုကတော့ DiskUsage ပါ။DiskUsage ကိုအသုံးပြုရင်သင့်ဖုန်းမှာနေရာအများဆုံးယူထားတဲ့ ဖိုဒါတွေ၊ဖိုင်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာနိုင်ပါတယ်။
DiskUsage ကို စစဖွင့်ချင်းမှာ Scan လုပ်ဖို့Storage Destination ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ Scan လုပ်တဲ့အချိန်ဟာစက္ကန့် ပိုင်းပဲကြာမြင့်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ သင့်ဖုန်းမှာနေရာယူထားတဲ့ဒေတာတွေကို ဖိုင်ဆိုက်အများဆုံးကနေစီပြီး ပြပေးမယ့် Visual Report ကျလာပါလိမ့်မယ်။အောက်ကပုံကိုကြည့်ရင် သင့်ဖုန်းမှာ ဘယ်အရာတွေက နေရာဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုတာသင်သေချာသိပါပြီ။
Application တစ်ခုဒါမှမဟုတ် ကဏ္ဍ တစ်ခု ကိုရွေးချယ်လိုက်ရင် ပိုပြီးအသေးစိတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
App ရဲ့ ဒေတာတွေကိုရှင်းဖို့ ၊ Cache တွေကိုရှင်းဖို့ နဲ့Uninstall လုပ်ဖို့ အတွက် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ Show button ကိုနှိပ်ပါ။ဒါဆိုရင် App info screen ကိုရောက်သွားပြီး မလိုအပ်တာတွေကိုရှင်းနိုင်ပါပြီ။
DiskUsage က သင့်ဖုန်းမှာနေရာယူထားတဲ့ဖိုဒါတွေ၊ဖိုင်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲ သိရှိနိုင်တဲ့ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Windows မှာလည်း ဒီလို ဖိုင်ဆိုက်ကြီးတဲ့ ဖိုဒါတွေ၊ဖိုင်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာပြီးရှင်းနိုင်တဲ့ WizTree ဆိုတဲ့ Freeware ကိုအသုံးပြုပြီး နေရာလွတ်တွေ ရရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Android Phone မှာနရောနညျးနပွေီလား? DiskUsage သုံးပွီးဖိုငျတှကေိုရှငျးပါ။
Android Phone မှာနရောလှတျတှေ နညျးလာတာဟာ သငျ့ဖုနျးရဲ့Performance,Speed ကိုကစြပေါတယျ။အဲဒီအတှကျမလိုအပျတဲ့ App တှကေို Uninstall လုပျသငျ့သလို မလိုအပျတဲ့ဖိုငျတှကေိုလညျးရှငျးပဈသငျ့ပါတယျ။ဒီလိုရှငျးဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံး App တဈခုကတော့ DiskUsage ပါ။DiskUsage ကိုအသုံးပွုရငျသငျ့ဖုနျးမှာနရောအမြားဆုံးယူထားတဲ့ ဖိုဒါတှေ၊ဖိုငျတှကေိုလှယျလှယျကူကူရှာနိုငျပါတယျ။
DiskUsage ကို စစဖှငျ့ခငျြးမှာ Scan လုပျဖို့ Storage Destination ကို ရှေးပေးရပါမယျ။ Scan လုပျတဲ့အခြိနျဟာစက်ကနျ့ပိုငျးပဲကွာမွငျ့ပါတယျ။
ပွီးရငျတော့ သငျ့ဖုနျးမှာနရောယူထားတဲ့ဒတောတှကေို ဖိုငျဆိုကျအမြားဆုံးကနစေီပွီး ပွပေးမယျ့ Visual Report ကလြာပါလိမျ့မယျ။အောကျကပုံကိုကွညျ့ရငျ သငျ့ဖုနျးမှာ ဘယျအရာတှကေ နရောဘယျလောကျယူထားလဲဆိုတာသငျသခြောသိပါပွီ။
Application တဈခုဒါမှမဟုတျ ကဏ်ဍ တဈခု ကိုရှေးခယျြလိုကျရငျ ပိုပွီးအသေးစိတျပွပေးမှာဖွဈပါတယျ။
App ရဲ့ဒတောတှကေိုရှငျးဖို့၊ Cache တှကေိုရှငျးဖို့နဲ့ Uninstall လုပျဖို့အတှကျ ညာဘကျအပျေါထောငျ့မှာရှိတဲ့ Show button ကိုနှိပျပါ။ဒါဆိုရငျ App info screen ကိုရောကျသှားပွီး မလိုအပျတာတှကေိုရှငျးနိုငျပါပွီ။
DiskUsage က သငျ့ဖုနျးမှာနရောယူထားတဲ့ဖိုဒါတှေ၊ဖိုငျတှကေိုလှယျလှယျကူကူပဲ သိရှိနိုငျတဲ့ အလှနျကောငျးမှနျတဲ့ App တဈခုဖွဈပါတယျ။ Windows မှာလညျး ဒီလို ဖိုငျဆိုကျကွီးတဲ့ ဖိုဒါတှေ၊ဖိုငျတှကေိုလှယျလှယျကူကူရှာပွီးရှငျးနိုငျတဲ့ WizTree ဆိုတဲ့ Freeware ကိုအသုံးပွုပွီး နရောလှတျတှေ ရရှိအောငျပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
ရှောင်မီက အမေရိကန် စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှာ ယှဉ်ပြိုင်တော့မည်